မင်္ဂလာပါ။ သင်ဖြတ်ပြီးလာပါတယ်မယ့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်လုံးဝကျိန်ဖို့ဂိမ်းများအကြောင်းကိုချည်းနှီးသော၊သင်မူကား၊မကျော်အသက်အရွယ်၊သို့မဟုတ်သင်မယ့်အရာတစ်ခုခုအတွက်ရှာဖွေနေကြောင်းရဲ့လိင်၊ဒါဟာဖြစ်နိုင်အကောင်းဆုံးသောလက်ဝဲချက်ချင်း! မြင်တဲ့အတိုင်း၊ကျယ်သောရူပါရုံကိုအချည်းလိင်ဂိမ်းပေးတဲ့လူတွေရှိဖို့လက်လှမ်းညမ်းဗီဒီယိုဂိမ်း parodied အပေါ်အချည်း။ ကျွန်တော်တို့တွေအပျော်ရွှင် lads တယ်အတူတူတစျနေ့ကပြီးကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောစိတ်ကူးရဒီကားလမ်းပေါ်တွင်ပြသ။, ကျနော်တို့ဖူးမှခရီးရောက်ဖို့ရေကူးကန်အကောင်းဆုံးအသင်းပတ်လည်နှင့်ယခု၊ကျနော်တို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေလူတိုင်းလက်လှမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးသန့်ခေါင်းစဉ်။ ပါကရှေ့ဆက်အချိန်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုသင်ရှာဖွေအတွင်းနေရာဖြစ်ပါသည် ၁၀၀%ချုပ်လုပ်ထားငါတို့အားဖြင့်၊ငါတို့အဘို့အ။ ဒီမဟုတ်ပါဘူးလိုင်စင်၊ဒီမကအဆင်ထုတ်ကုန်:ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူတစ်ဦးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပေးခြင်းအဆင္ေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအားဖြင့်ရာသီ'။။။။။ တစ်ခုခုကဲ့သို့မြည်စေခြင်းငှါအတွက်စိတ်ဝင်စား? ကောင်းစွာ၊သင်စဉ်းစားနေတက်လက်မှတ်ထိုး၊အပေါ်ဆက်လက်ပေးပါ့မယ်အားလုံး၏အရည်ရွှမ်းသောအသေးစိတ်လိုအပ်ကြောင်း။, ကျွန်တော်တို့သင်ပြမှတစ်ဖွဲ့လုံးသစ်ကိုအခမ္းယ္လွည္း–သေချာသည်!
ပထမဦးဆုံးအရာသင်ရမည်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ဒီအကြောင်းလက်လှမ်းဖြစ်ပါသည်၊တာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်နောက်ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်သောအချို့ဂိမ်းထုတ်လုပ်သူသင်ကိုင်ဓားဖြင့်တောင်းဆိုသောလက်ကျော်အတွက်ပိုက်ဆံအမိန့်အဘယျသို့ရရလိုခငျြ:တော်တော်လေးစိတ်ပျက်စပြောဖို့အလွန်အနည်းဆုံး။ ယခု၊ကျွန်တော်တို့မှာပြီးပြည့်စုံနှင့်အပြင်မယုံကြည်သည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်၊ဒါကြောင့်ကျနော်တို့လုပ်ဖို့တာပေါ့စေသာဘဲသြင္းသင်နှင့်သင်၏မုန့်ကိုအနှံမှကြွလာသောအခါရော်ညမ်း။, ဤချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူ၊ကျနော်တို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းသင်နားလည်သဘောပေါက်နားလည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတိကဝတ်သွားထက်နှင့်ကျော်လွန်တာဝန်ရဲ့တောင်းဆိုမှု။ ထို့အပြင်၊အား၏မှတ်ချက်အောင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ကိုဆက်လက်အမှုအရာဤကဲ့သို့သောအချိန်ကုန်အထိ။ ကျနော်တို့အနေဖြင့် ၁၀၀%အခမဲ့ကစားရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစဉ်အမြဲဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤကိစ္စသည်မေးခွန်းကိုအသ:သူအတွက်ပေးဆောင်အားလုံး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်? ကောင်းစွာ၊အဖြေကတစ်ခုအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်:သငျသညျယောက်ျားတွေ! ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းလမ်းကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာတစ် freemium လက်လှမ်းပုံစံ၊အဘယ်မှာလျှင်သင်ကြိုက်အဘယ်အရာကိုသင်ဒီမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၊သင်အထောက်အကူဖြင့် chucking အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေအနည်းငယ်ဆိုတော့အားဖြင့်အချို့သောအမျိုးအစားအတွက်သိမ်းယူ။, ဘာမှမအနိုင်ရမှပေးဆောင်ခြင်းနှင့်သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အလုံးကိုခေါင်းစဉ်ကိုပေးပြီးပိုက်ဆံ၊သင်မူကား၊ကျင့်ကိုကျင့်လျှင်လိုချင်အထောက်အကူ၊ရှေ့ဆက်သွားနှင့်ပြု! လှူဒါန်းမှုများလည်းလက်ခံ၊ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်မမှုခံစားရဖိအတွက်နည်းနည်းလေးမှလက်ပေါ်မှာသင့်ရဲ့ငွေသားပိုက်ဆံလိုလျှင်သင်ကဲ့သို့မခံစားရဘူး။
ဒါဟာမြင့်မားရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ဂိမ်းအကောင်းကြည့်။ ကျွန်တော်ရန်မလိုအပ်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းဂရပ်ဖစ်နှင့်ခေတ်မီသောဗားရှင်းအားလုံး၏အစာ:အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့လိုအပ်သည်စစ်မှန်သောအသက်ကိုကိုယ်စားပြု၏အဘယ်အရာကိုသူတို့၌ကဲ့သို့အကြည့်ရှုမူရင်းပစ္စည်း။ စီမံပြီးပါပြီဤအောင်မြင်ရန်အားဖြင့်များနှင့်ပတ်သက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏အနုပညာလက်ရာလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ထို့အပြင်အတွက်၊တစ်ဦးမှီခို၏အတုမှတဆင့်အလုပ်လုပ်နှင့်အတူအကောင်းဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီးအနုပညာရှင်များစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်။ အဆုံးရလဒ်ကတော့တော်တော်လေးမင်းအတွက်အနီးကပ်အစစ်အမှန်အရာ–တစ်ခါတစ်ရံ၊ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှိသည်ခက်ခဲတဲ့အချိန်အလုပ်လုပ်ဘယ်အရာကိုထုတ်ရဲ့မူရင်းနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ရဲ့အပြက်!, ထို့အပြင်အတွက်အတိအနုပညာလက်ညီ၊ငါတို့သည်လည်းအဆင့်မြင့်မြင့်သောငှါစက်ရုပ်ကို၏စောင့်ရှောက်မှုကြာ။ မှန်တယ်:သင်ထင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အတုအပလုပ်ရုံကြီးမှကန့်သတ်အသစ်ထောင့်၊နောက်တဖန်အထင်။ ဒါဟာသာမကြာသေးမီသမိုင်းတွင်အကြောင်းဒီအမျိုးအစားအရာတစုံတခုခဲ့။ ဘာတွေလုပ်နေကြ၊အတိအကျ? ကောင်းစွာ၊ရှိပါတယ်နက်ရှိုင်းတဲ့သင်ယူမှုစနစ်င့်ကိုအသုံးပြုသွားမည်သောအခြေခံအားဖြင့်ကြာမှာရာပေါင်းများစွာ၏လိုင်းများ၏စကားပြောပြီးတော့ဖန်တီးပရိုဖိုင်းပုံကိုသူတို့ကတင္သူကွဲပြားခြားနားသောစကားသည်။, ကတည်းကကျနော်တို့ရှိသည်ကိုအများကြီးကိုးကားပစ္စည်းကျွန်မတို့ကိုကျွေးမွေးနိုင်တဲ့အတွက်၊အဆုံးသတ်ရလဒ်ကတော့မင်းအလားတူ! သေချာအောင်၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးပြီးပြည့်စုံသောပွဲစဉ်နှင့်ကျွန်မတို့အချစ်ကိုရဖို့မူရင်းအသံသရုပ်ဆောင်နိုင်လျှင်၊ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်မယ့်နည်းနည်းအထွက်လမ်းများအတွက်သည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကလုပ်နေပါတယ်။
ကျနော်တို့ချင်ပါဘူးထုတ်ဖေါ်ဖို့အလွန်အကျွံအကြောင်းသင်ဘာလုပ်နေပါလိမ့်မယ်အတွက်ချည်းလိင်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်၊ဒါပေမယ့်နားလည်ကောင်းကောင်းရှေ့ဆက်အချိန်ရဲ့အာရုံဒီနေရာမှာအပေါ်ပျော်စရာ၊လိင်-လောင်စာ။ များစွာရှိပါတယ်ရှာဖှေနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့နှင့် ၄ စာသင်ဆင္ေကစားဖြစ်။ ဇာတ်လမ်းအပြောင်းအလဲအနည်းငယ်ပေါ်မူတည်သူကိုရွေးချယ်ပါ၊ဒါပေမယ့်အများအပြားရှိပွင့်လင်းကမ္ဘာအရေးယူ၊ဒိုင်များကိုလေ့လာစူးစမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကြောင်းကိုသင်ကြိုးပစ်ချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အ။ လက်လှမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအောင်မြင်သည်လုံးဝမှတဆင့်သင့်ရဲ့ရာက္ဇာလည်းအနက်အဓိပ္ပာယ်၊သင်ဖို့ရှိသည်မည်မဟုတ်ဘာမှဒေါင်းလုပ်ပြည်တွင်းလျှင်သင်ချင်ကြပါဘူး။, ကျွန်တော်လည်းရှာနေမှာထည့်သွင်းတစ်ဦးမိုဘိုင်းလ်ဗားရှင်းအချည်းလိင်ဂိမ်းအတွက်လွန်းမဝေးအနာဂတ်–အဘို့ကြီးမဟုတ်ကြဘူးသောသူတို့သည်အမြဲလိုဝန်ဤ XXX ရော်ခေါင်းစဉ်အပေါ်သူတို့ရဲ့အဓိကက်ပါတယ္။ ရိုးရှင်းစွာကိုထား၊အနာဂတ်အဖြစ်တော်တော်လေးမင်းအတွက်ကောင်းသောလျှင်သင်၏ပရိသတ်တစ်ရာသီနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကသွားလိမ့်မည်ထက်နှင့်ကျော်လွန်ကယ်နှုတ်ဖို့သင်ကကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းၡမ်ားဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံ–အာမခံချက်!
ဒါကြောင့်ငါထင်တော်တော်အများကြီးအရာအားလုံးကိုပြောချင်ခေါင်းစဉ်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအခုအချိန်မှာ။ သင်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောပြတာ lightyears ရှေ့ဆက်ယှဉ်ပြိုင်၏အရွယ်ရောက်ပြီးညစ်ညမ်းဂိမ်းအာကာသနှင့်အကြှနျုပျတို့သညျဖို့မျှော်လင့်အောင်ဏာရွေ့အမြန်ဆုံးရဖို့မိမိကိုယ်ကိုတစ်ပင်ပိုကောင်းဂုဏ်သတင်း။ သင်ကြိုက်လျှင်သင်၏အသံအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်သေချာပါစေ၊အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးလာအတွက်! ကျနော်တို့လိမ့်မယ်သင့်ရဲ့စိတ်ကိုမှုတ်နှင့်အတူဘယျအရာငါတို့သည်အတွင်းအပြင်နှင့်အမှုအရာသာရသွားရန်ဖျော်ဖြေမှုထွက်ပေါ်ကဒီမှာနေ။
အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဤမျှလောက်အချိန်ယူပြီးဖတ်ရှုဖို့ဒီတိုအက်ဆေးအပေါ်အဘယ်ကြောင့်အချည်းလိင်ဂိမ်းဒီတော့ကြောက်မက်ဘွယ်သော။ စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးပျော်ရွှင် jerking!